Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil Rikoorka Caruurta Hore ee Sheeko Xogta Wanaagsan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee xiddiga reer Brazil ee ugu caansan magaca Nickname; 'Kubada cagta ee xigta weyn'. Our Storyarlison Childhood Story Sheeko iyo Waadi Xaqiiq ah waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan ka ah, nolosha qoyska, nolosha xidhiidhka iyo waxyaabo badan oo caddayn ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, hase yeeshee dadka yari waxa ay tixgeliyaan "Our Richarlison Biography" oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Xikmadda Caruurta Hore ee Sheeko Xaqiiqda ah -Nolosha Hore
Richarlison de Andrade wuxuu ku dhashay maalinta 10th May May 1997 ee Nova Venécia, Espírito Santo, Brazil. Waxa uu dhashay Toros by waalidiin, Mr iyo Mrs Andrade.
Richarlison waa kii ugu da 'weynaa ee shan caruur ah oo u dhashay aabihii oo ahaa walxo iyo hooyadiis, nadiifiye iyo iibiyaha jalaatada. Tan macnaheedu waxa weeye wuxuu ku dhashay inuu saboolnimo ku dhasho. Maanta waxay qabteen shaqadooda, hadda waxay bedeleen dhamaanba mahadnaqa wiilkooda noloshooda.
Dhanka nolosha qoyska, hooyadiis iyo aabaheed waxay bixiyeen Richarlison horumarinta edeb-wanaagga wanaagsan.
Sida da 'yar, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa iibiyey shukulaatada iyo jalaatada si uu lacag ugu sameeyo, halka saaxiibadiis ay iibiyeen mukhaadaraad. In uu erayada ..."Inta badan saaxiibaday ayaa u baxay inay iibiyaan mukhaadaraad dariiqa sababta oo ah waxay arkeen lacag fudud; lacag badan. Laakiin waan ogaa inay qalad tahay, sidaas darteed waxaan iibiyey shukulaatada iyo jalaatada iyo baabuurta dhaqday sababtoo ah waxaan ogaa in ay ahayd waxa ugu saxsan ee la sameeyo. Anigu waan caawin karaa hooyaday. 'Saaxiibadayadu had iyo jeer waxay ii adeegsadeen in ay ii sheegaan:' Halkaan u imow, ha ahaato gabadh yar, noo yimaada oo qiiq na nala soo qaado, noo soo iibso oo naga iibiso, waxaad samayn kartaa lacag badan.
Richarlison weligiis ma dooran nolosha dembiga. Waxa uu ku qanacsanaa wax yar oo nolosha ah, xitaa ma uusan aheyn iibiyaha barafka ugu wayn adduunka.
Xikmadda Caruurta Hore ee Sheeko Xaqiiqda ah -Ka bilow Cagta
Richarlison waxay ku soo baratay Nova Venecia oo ku taal gobolka koonfur-bari ee Espirito Santo - oo ku yaala xeebaha cajiibka ah, laakiin waxaa loo yaqaanaa wax soo saarka birta iyo batroolka marka loo eego kubada cagta.
Isagoo ka hadlaya qorraxda oo ku saabsan noloshiisa Brazil, Richarlison wuxuu yiri: "Markii aan ahaa todoba nin oo aabaheed ayaa 10 kubbadood u soo iibsaday, ma ahan sababtoo ah inuu awoodi karo inuu sameeyo, laakiin sababtoo ah wuxuu doonayay inaan noqdo ciyaaryahan wanaagsan. Inta badan waqtigaygii saaxiibadeen iyo waxaan ku ciyaaray jidka, waxaan uqornaa goolal naga cagahaaga. Waxay u egtahay sida fawya ah, meel faqri ah. "
Sidoo kale laga soo bilaabo da 'yar, oo ka ciyaara horyaalka Premier League wuxuu ahaa hamiga weyn ee Richarlison. Waxa uu sidoo kale yiri: "Waxaan daawaday Premier League on TV-ga adeerkiis. Waan jeclaa wixii aan arkayay - xawaaraha ciyaarta iyo habka ay marnaba joojin. "
Richarlison wakhtigaas had iyo jeer wuxuu la hadli lahaa maskaxdiisa ... 'Waxaan doonayaa inaan halkaan ciyaaro hal maalin'.
Xikmadda Caruurta Hore ee Sheeko Xaqiiqda ah -badbaadaha
Richarlison ayaa soo maray safar cajiib ah si uu u sameeyo halka uu maanta joogo.
Markii uu ahaa 14 sano jir ah, oo si xamaasad leh u ciyaara kubadda cagta ee waddooyinka Nova Venecia, koonfurta bari ee Brazil, nasiib daro ayaa dhacday.
A gangstar iyo daroogada maandooriyaha marku calaamadiyey oo wuxuu cadaadiyey xabbad ee qorigiisa ka soo horjeedka hore ee Richarlison. Tani waxaa soo raaca isaga oo soo saaraya nooc kasta oo ah hanjabaad ku aaddan xayiraad (ciyaar kubadda cagta) oo ku saabsan dhulkiisa daroogada.
Maaddaama Richarlison uu dhigayo, "Waqtigan xaadirka ah aad ayaan u baqayay. Sababtoo ah haddii uu soo tuuray trigger, ka dibna way noqon lahayd. Sayidka daroogada ah ayaa inoo sheegay in haddii uu markale naga heley uu naga toogan doono dhibaato la'aan - aniga iyo saaxiibaday. Waxaan u maleynayaa inay igu wareereen qof kale. Waxa uu u maleynaayey in aan xadidoono daroogadiisa, waxaana uu kubadda u isticmaalay qaab muuqaal ah, laakiin waxaan ciyaaray kaliya kubada cagta wiSaaxiibadayda. Kadib markii uu hoos u dhigay qoryihiisa, waan jeestay oo bilaabay inuu ordo. Marna kuma laaban waddadaas. Ma aanan sheegin isaga. Aad ayaan u baqayay. "
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -La kulanka Ilaah
Mucjiso ayaa dhacday markii Richarlison uu ahaa 16.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa bedelay markii uu la kulmay ganacsade Renato Velasco, kaasoo u arkay inuu ciyaari karo kooxdiisii ​​hore ee Real Noroeste.
In erayada Richarliso,"Renato ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee fursad ii siiyay. Toddobaadkii ugu horreeyay, wuxuu i siiyay kabo kabo kubada cagta ah sababtoo ah ka hor inta aan la ciyaarayay ciyaartoy qaali ah. "
Ka dib markii uu ka caawiyay kabaha kubadda cagta, Renato Velasco ayaa u sheegay Richarlison, 'Waxaan rabaa inaan ku caawiyo maxaa yeelay waxaad leedahay tayada'.
Tartankan ayaa ka hadlayey Renato waxa uu qaatay Richarlison America America Mineiro oo ku yaala heerka labaad ee Brazil ee December 2014 iyo Fluminense (heerka sare ee Brazil) sanad kadib.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Miracle
Bishii Agoosto, wicitaan taleefan oo ka yimid macalinka cusub ee Watford Marco Silva ayaa ku qanciyay Richarlison inuu Ajax ku soo laabto saacadda 11aad wuxuuna ku biirayaa Hornets.
Xaqiiqdii, Watford waxay saxeexday 20-sano-jir ayaa waxaa laga saxiixay albaabka Ajax. Isagoo aad u naxdin leh, wuxuu helay ogolaansho shaqo UK ah inkastoo uusan u soo ciyaarin xulka qaranka Brazil. Waa adag tahay qof aan u ciyaarin kooxdii ugu horeysay ee Brazil si uu u helo rukhsad shaqo. Xaaladda Richarlison way kala duwan tahay.
Richarlison ayaa u sheegay ESPN Brasil. "Ka dib markii Marco iigu yeedhay, waxaan sameeyaa cilmi baaris google ah oo ku saabsan Watford waxaanan heshiis ku gaadhay marnaba."
Waxa ay ku xiran tahay in Renato Velasco uu haatan yahay maamulaha Richarlison.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Kaalmada gacmeed
Waxay ahayd Willian oo ka caawiyay Richarlison inuu dego England. Richalison wuu arkaa Willian sida lataliye. Labada kooxood ayaa si aad ah u yaqaanay midba midka kale ee Brazil ka hor inta aysan saxeexin iyaga oo London u yimid halkaas oo kooxdooda (Chelsea iyo Watford).
Richarlison ayaa sidoo kale ku dhow Neymar oo uu u arko inuu yahay qaabkiisa. Inta lagu jiro fasaxyada, wuxuu qaadaa waqti uu ku soo booqdo Paris.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -The Next Big Wax
Shaki la'aan, Richarlison waa waxa ugu weyn ee kubadda cagta caalamka.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara wuxuu ahaa wadnaha iyo nafta bilawga weyn ee Horyaalka ee ololaha 2017 / 2018, isagoo dhaliyay seddex gool oo horyaalka ah iyo taageerayaal taageerayaal leh xirfadiisa, xawaaraha iyo farsamada.
Lakiin dib u fakirida, afar sano ka hor markii uu ka soo wareegay qorista, nolosha da 'yarta ayaa ahaa mid aad u, aad kala duwan. Isaga marnaba lama yaabin sababtoo ah wuxuu ogyahay mana waligiis marna shaki ku jirin awoodiisa.
Wuxuu mar yiri ... "Ma yaabin sababtoo ah wax walba noloshayda si dhaqso ah ayaa isbedelay. Laga bilaabo maalinta aan bilaabay inaan u ciyaaro America, ka dibna Fluminense, haatan Premier League - wax walba ayaa yimid waqtigii saxda ahaa. "
Talaabooyinka dibadda - gaar ahaan kuwa aadka u yar - badanaa waxay u baahan yihiin wakhti ay kula qabsadaan kubada cagta Ingariiska, laakiin Richarlison horeba wuxuu u muuqdaa mid ku habboon guriga, inkastoo uu weli ku sii jeedo luqada.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Nolosha Xiriirka
Haa wuu haatan hodan, haa waa nin aad u fiican, macnaheedu wuxuu yahay albaabka Richarlison waa u furan yahay dhammaan walxaha macaan oo ay ka mid tahay inuu saaxiib la yahay. Si kastaba ha noqotee, Richarlison wuxuu doortay in uu xiriirkiisa xariir gaar ah yeesho. Arrinta kaliya ee wakhti yar ka hor ayaan heleynaa wax.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Qorshayaasha Watford & Brazil
Richarlison wuxuu leeyahay qorshooyin waaweyn Watford. In uu erayada ...
"Qorshahaygu waa inaan taariikhda halkan ku qoro Watford. Waxaan doonayaa inaan goolal badan dhaliyo oo aan xusuusiyo dad badan. Sidoo kale, waxaan rajeynayaa in hal maalin loogu yeero xulka qaranka Brazil, taas oo ah goolkaygii 1 noloshayda. Inaad ku jirto Koobka Adduunka waa riyadeyda. "
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Tartanka ugu xoogan
Richarlison ayaan wakhti dheer qaadanin si uu ula qabsado kubada cagta Ingariiska, lakiin waxa uu ka tagayaa John Stones madaama uu ka soo horjeeday kooxda ugu awooda badan.
Richarlison Sheekooyinka Carruurnimada Xogta Waalidka -Meelaha Zodiac
Richarlison's zodiac waa Taurus oo leh sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa;
Xoogagga Richarlison: Bukaanka, bukaanka, wax ku oolka ah, u gooni ah, mas'uulka ka ah, deggan.
Richarlison's Tabaruce: Qodobbada, lahaansho, oo aan rooneyn.
Maxaa Raaxo Leh: Beerta, karinta, muusikada, jacaylka, dharka tayo sarre leh, gacmo furan.
Maxay Rabshadlaha Naafada ah Isbeddel deg-deg ah, dhibaatooyin, amni-darro nooc kasta ha ahaato, muraayadaha synthetic.
Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada "Richarlison Childhood Story Story" oo lagu daray sheekooyin qeexan. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta